युरोपेली सिनेमाको भविष्य अन्त्य भएको हो ? :: NepalPlus
युरोपेली सिनेमाको भविष्य अन्त्य भएको हो ?
नेपालप्लस समाचार डेस्क२०७८ असार २६ गते १९:५५
विश्व प्रसिद्द क्यान फिल्म फेस्टिबल सन् २०२० रद्द भयो । कोरोना भाईरसका कारण यो आयोजना हुन सकेन । कोरोना भाईरस प्रतिबन्ध खुलेपछि सेभेन्थ आर्ट (सातौं कला) भनेर चिनिने यसका दिन फेरि फर्किएका त छन् तर यसको क्षेत्र भने बिनाशकारी अवस्थामा छ ।
यो बिचमा लामो समयसम्म सिनेमाहरु बन्द रहे । के सिनेमा बन्द र महिनौंसम्म फिल्म निर्माणमा भएको कटौतीबाट यो क्षेत्र पुन: ब्युँतिन संभव होला ? अहिले यस्तो प्रश्न युरोपमा गम्भिररुपमा उठेको छ । किनभने कोरोना लकडाउनले नयाँ अवस्था, नयाँ बजार, नयाँ पहुँच सृजना गरिदिएको छ ।
लकडाउनले श्रब्यद्रिष्य उत्पादन र सिनेमा हेर्नकालागि नयाँ खालको बानी बसालिदिएको छ । नेटफ्लिक्स, डिस्ने, अमाजोन प्राईम भिडियो जस्ता दर्जनौं प्लेटफर्महरु आएर यस क्षेत्रमा पहुँच बनाए । यस्ता प्लेटफर्म खासगरि अमेरिकीहरुले स्थापित गरेर विश्वब्यापी बनाए । सिनेमाको स्वाद लिनेहरुलाई यिनै प्लेटफर्मले सिनेमाघर नगैकन घरघरै मन लागेको बेला आफूलाई मन परेको, रोजेको फिल्मको पहुँचमा पुर्‍याइदिए । तर युरोपेलीहरुले भने खासै यसमा ध्यान दिन सकेनन् । सिनेमा क्षेत्र धराशाही हुँदै गर्दा, आफ्ना ग्राहक अ मेरिकी प्लेटफर्महरुले तानिरहँदा युरोपेलीहरु मूकदर्शक मात्रै बनिरहे ।
त्यसो त, युरोपियन युनियनले ईयुभित्र सिनेमालाई ३० वर्ष देखि सक्रियताका साथ समर्थन, सहयोग गर्दै आएको छ । आर्थिक रुपमापनि । आगामी ६ वर्षको लागि १ अर्ब ४० करोड युरोको बजेट योजना बनाएको छ । तर यति बजेट सहयोग गरेपनि ठूला सिनेमामा जाने लत दर्शकको पहिलेझैं फर्किने देखिन्न ।
हुन त माथि उल्लेखित परियोजना युरोपेली संसदसँग साझेदारीमा हो । परियोजना संचारको क्षेत्रमा यूरोपीयन संसद अनुदान कार्यक्रमको रूपरेखा भित्र यूरोपीय संघद्वारा सहुलियत कार्यक्रम हो त्यो । क्यान फिल्म फेस्टिबलपनि त्यहि सहयोग अन्तर्गतनै थियो ।
युरोपेली संसद क्यान फिल्म फेस्टिबलको तयारीमा संलग्न थिएन । यस परियोजनाको सम्बन्धमा व्यक्त गरिने कुनैपनि जानकारी वा विचारका लागि जिम्मेवार वा बाध्य छैन । त्यसका लागि लेखकहरू, अन्तर्वार्ता लिएका ब्यक्ति, कार्यक्रमका सम्पादकहरू वा प्रसारकहरू मात्र जिम्मेवार हुन्छन् । यसका बारेमा लागू गरिएका नितिनियम वा कानून अनुसार । क्यानकालागि यूरोपीय संसदलाई कुनै पनि क्षतिको जिम्मेवारपनि मान्न सकिन्न । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष क्षती वा लाभका लागि उत्तरदायी पनि होइन । परियोजना कार्यान्वयनबाट हुने परिणामको जिम्मेवार इयु संसद र यो सानो सहयोग दिने ईयु अन्तर्गतको बित्तिय सहयोग निकायपनि जिम्मेवार हुन्न ।
कोरोना महामारीले अन्यत्र झैं यो क्षेत्रमा ल्याएको बिनाशपछि ठूला प्लेटफर्महरू कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बहसपनि अहिले उठेको छ । यो वर्ष अडियोभिजुअल मेडिया सेवाहरूको लागि एक यूरोपीय निर्देशन लागू हुँदै छ । यो यूरोपियन सिनेमामा लगानी गर्न बाध्य गर्नको लागी एक निर्देशिका जस्तो हो ।
यसमा ईयुका आफ्नै अप्ठेरा, बाध्यता र पहुँच छन् । ईयुले दिने बजेटमापनि त्यो अवस्था रहन्छ । दायित्वहरू देश अनुसार फरक फरक हुन्छन् ।
जुलाई १ मा यो क्षेत्रमाथि भएको विषयको बहसमा लकडाउनले सातौं कला क्षेत्रमा फ्रान्सलाई ज्यादै नराम्रोसित हिर्काएको निचोड निकालियो । अब फ्रान्सको सिनेमा क्षेत्र वा सातौं कला क्षेत्रबाट आउने आम्दानीको २० प्रतिशत देखि २५ प्रतिशत युरोपेली उत्पादनहरुमा लगानी गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । फ्रान्सले जसरि र त्यहि अनुपातमा इयुका सबै देशले त्यस्तो लगानी गर्न सक्दैनन् । इयुका सबै देशको अवस्था यो क्षेत्रमा फ्रान्सको जस्तोपनि छैन । इयुका सबै देशको प्राथमिकतापनि समान छैन ।
क्यान फिल्म फेस्टिबल युरोपकै गौरवको विषय थियो । युरोपेली युनियनले समग्रमा गौरव र शान देखाउने फेस्टिबल थियो त्यो । विश्व सिनेजगतको उपस्थिति बटुलेको थियो । यसले सातौं कलाको क्षेत्रलाई विश्वको ध्यान खिचिरहेको थियो । यो क्षेत्रकालागि नयाँ विषय खोज्ने, बहस गर्ने, नयाँ लगानीलाई प्रेरित गर्ने । विश्वबाट ल्याएका नयाँ नयाँ फिल्म, डकुमेन्ट्री, नयाँ लेखक, निर्माता, कलाकारको रसस्वादन गरेरपनि इयुलाई यो क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान मिलेको थियो । क्यान फेस्टिबलले सिने जगतलाई जिवन्त, चलायमान बनाइरहेको थियो । अब क्यान फेस्टिबलले उहि रुपमा जिवन पाउने अवस्था रहेको देखिन्न । युरोपेलीहरुबिच यसलाई ठूलो चिन्ता, बहसको विषयपनि बनाइएको छ । त्यसैले क्यान अवरुद्द भएसँगै युरोपेली सिनेमा क्षेत्रको मृत्यु भएको प्रतिक्रियापनि धेरैको छ ।
युरोपेली सिनेमा क्षेत्रलाई पहिले देखिनै अमेरिकी सिने क्षेत्रले हिर्काएको, पेलेको छ । युरोपेलीहरु अमेरिकामा बिस्तार हुन पटक्कै नसक्ने तर अमेरिकी कला क्षेत्रले युरोपेली क्षेत्रमा प्रभाव बिस्तार गर्दै लैजाने भैरहेको छ । लकडाउनका बेला जुन समयमा युरोपेली सिनेमा क्षेत्र थला पर्‍यो त्यहि बेला अमेरिकी प्लेटफर्महरुले युरोपेली सिनेमाको बजारमापनि झन पहुँच बिस्तार गरे । युरोपेली दर्शकको पहुँच आफ्नोतिर आकर्षित गरिदिए । आफ्ना ग्राहक बनाए । अमेरिकी ब्लकबस्टरको प्रतिस्पर्धाले पहिले नै गम्भीर क्षतिग्रस्त भएको युरोपेली सिनेमाको भविष्य के हुन्छ त अब ?